Ama-Freshsales: Ukuheha, Ukubandakanya, Ukuvala, kanye Nokwakhela Ukuhola Kwebhizinisi Lakho Kupulatifomu Eyodwa Yokuthengisa | Martech Zone
Iningi lama-CRM namapulatifomu wokunika amandla okuthengisa embonini adinga ukuhlanganiswa, ukuvumelanisa, nokuphathwa. Kunezinga eliphakeme lokwehluleka ekwamukelweni kwalawa mathuluzi ngoba kuyaphazamisa enhlanganweni yakho, isikhathi esiningi esidinga ababonisi nabathuthukisi ukuthi benze konke kusebenze. Ukungasho isikhathi esingeziwe esidingekayo ekufakweni kwedatha bese kuthi ukuhlakanipha okuncane noma kungabi bikho noma ukuqonda ohambweni lwamathemba akho namakhasimende akho.
Ama-Freshsales iyi-CRM yokuthengisa yamaqembu angafuni ukwenza phakathi kwamathuluzi amaningi. AbakwaFreshsales baletha isisombululo sokuthengisa esingu-360-degree kwipulatifomu eyodwa, ukuze:
Ukuheha imikhondo efanele yebhizinisi lakho
Zibandakanye ngokusebenzisa amaphuzu okuthinta amaningi
Close isebenza ngokushesha
Ukwakhiwa ubudlelwano obubalulekile.
Izici ze-Freshsales Faka
Oxhumana nabo - umbono we-360-degree wekhasimende lakho onamaphrofayli omphakathi kanye nendawo ngayinye yokuthinta kusikrini esisodwa esinokunothisa iphrofayili okuzenzakalelayo.
Ukushaya Umholi Okukhaliphile - Lungisa ngesandla amagoli akho okuhola bese ufaka ubuhlakani bokufakelwa beFreshsales ukukala ukuhola ngokususelwa emsebenzini nakwiphrofayili yabo.
Ukuphathwa Kwezindawo - dala izindawo ezifana nesakhiwo sokuthengisa senhlangano yakho. Nikeza ngokuzenzakalela abathengisi abafanele kumakhasimende afanele.
Ukuqokwa, Imisebenzi, Amafayela, namanothi - hlela ama-aphoyintimenti, yenza amanothi asheshayo, wabelane ngamafayela, futhi uhlanganyele ne iqembu emisebenzini.
Ukuboniswa Kwemigwaqo Yokuthengisa - qapha inqubekela phambili kumadili avulekile ngokubuka okukodwa ngepayipi lokuthengisa elibukwayo ongalihlunga bese ulihlunga. Dala amapayipi amaningi (angenayo, aphumayo, e-commerce, njll.). I-interface ikwenza ukwazi ukuxhumana namathemba ngqo kusuka kudeshibhodi.
Iwebhusayithi nokulandelela uhlelo lokusebenza - landela amathemba akho futhi wazi ukuthi axhumana kanjani newebhusayithi yakho noma imikhiqizo yedijithali. Hlela izingxoxo ezihlakaniphile, ezifanele, bese uyisebenzisa ukumisa izikolo eziholayo ekukhetheni umkhondo oshisayo.
Umugqa wesikhathi womsebenzi - thola umbono wesikhathi somsebenzi ngamunye wethemba, ukuze iqembu lakho lokuthengisa likhethe izikhathi ezifanele futhi livale amadili ngokushesha.
Ama-Smartforms Okuhola - thatha ukuhola kwakho kwewebhu kuqonde ku-CRM yakho. Thola umongo ongcono wokuhola njengo Ama-Freshsales kugcwalisa ngokuzenzakalela ukuvakashelwa kwewebhusayithi, amaphrofayli ezokuxhumana nabantu, nokuningi.
Chofoza ukuze ushayele - akukho izindleko zesoftware / zehadiwe ezingeziwe. Vele ubeke izingcingo ngokuchofoza okukodwa ngaphakathi Ama-Freshsales usebenzisa ifoni eyakhelwe ngaphakathi - nazo zonke izingcingo ezingenayo neziphumayo zingene ngokuzenzakalela. Yenza ngezifiso lonke izwi lakho nokwamukela imiyalezo.
Uhlelo lokusebenza lweselula lwe-Android ne-iOS - thola ukubuka kwe-360 ° kwekhasimende lakho usohambweni ngezinhlelo zokusebenza ze-Freshsales Android ne-iOS.
Ukubikwa Komsebenzi Wekholi Ephumayo - thola ukuthi mangaki amakholi aphumayo enziwe ngabathengisi ngamunye esikhathini esithile.
Thumela futhi ulandelele ama-imeyili - thumela noma wamukele ama-imeyili kusuka kunoma yikuphi Ama-Freshsales noma iklayenti lakho le-imeyili, bese uthola i-imeyili kufolda ethunyelwe noma engenayo yazo zombili izinhlelo zokusebenza. Thumela ama-imeyili amaningi usebenzisa izifanekiso ezenziwe ngezifiso futhi ulandele ukusebenza kwazo ngokulandela umkhankaso. Thola izaziso zesikhathi sangempela ekuvulekeni nasekuchofozweni kwe-imeyili, bese uhlela inkambo yakho elandelayo yokusebenza. Sebenzisa i-DKIM kuma-imeyili asayiniwe ngamadijithali ukuze kuthunyelwe kangcono.
Ukuqhutshwa komsebenzi kanye nemikhankaso yokuthengisa - Shintsha imisebenzi ephindaphindwayo, izinqubo ezilula, futhi ukhiqize ngokwengeziwe ngokuhamba komsebenzi okuhlakaniphile. Yakha futhi ulandelele imikhankaso ye-imeyili esuselwa kumthetho yokuthumela ama-imeyili enziwe waba mathemba wakho. Qalisa izenzo ezizenzakalelayo ezisuselwa ekuziphatheni kwazo.
Imibiko Yokuthengisa nokubikezela - Sebenzisa imibiko ejwayelekile noma udale imibiko yangokwezifiso ukukhipha noma iyiphi idatha kusuka ku-CRM. Ungahlela futhi uthumele imibiko futhi wabelane ngayo ngokushesha kuwo wonke amaqembu akho. Nge umjikelezo wokuthengisa kanye nesivinini kubika, ungathola ukuthi ithimba lakho lithatha isikhathi esingakanani ukuvala amathuba. Khomba izigaba lapho abasebenzayo bakho bechitha isikhathi sabo esiningi emjikelezweni wokuthengisa.
AmaDashboard - buka imibiko eminingi esikrinini esisodwa nemibiko yedeshibhodi ebukhoma ebukhoma. Landela isimo sokuthengisa kwakho nganoma yisiphi isikhathi ngokusebenzisa uhlelo nezinketho zokuthekelisa.
Ukufuduka Nokuhlanganiswa - Ukuthekelisa nokuthepha okukodwa kwedatha okuthembekile futhi okusheshayo kusuka ku-Salesforce, Zoho CRM, Insightly, Pipedrive, Salesforce IQ, noma i-CSV nje. Hlanganisa ne- Freshchat, Freshdesk, G Suite, Ingxenye, i-Outlook, i-Zapier, i-Exchange, I-Hubspot, IMailchimp, iHhovisi, ngokuhlanganiswa okukhiqizwe kakhulu okuzayo!
Izilimi eziningi - Izilimi eziyi-10 manje seziqalisiwe ukuxhasa isisekelo samakhasimende emhlabeni jikelele.
Kuyavumelana - Ibanjwe e-United States ku-ISO 27001, SSAE16, nasezikhungo zedatha ezihambisana ne-HIPAA. Imikhuba yobumfihlo ye-Freshworks iqinisekiswe yi-TRUSTe ne-GDPR.
Bhalisela i-Akhawunti Yamahhala Yama-Freshsales
Ukudalulwa: Ngingu- Ama-Freshsales oxhumana nabo.
Tags: 360 degreeaiukuhlakanipha okungekhona okwangempelaimeyili eningiCRMukufuduka kwe-crmimeyili MarketingAma-FreshsalesI-HIPAAukuhola amagoliizilimi eziningiukuphathwa komkhankaso wokuthengisaumjikelezo wokuthengisaUkunika Amandla Ukuthengisaisibikezelo sokuthengisaipayipi lokuthengisayokubika yokuthengisaijubane lokuthengisaokuzenzakalelayo kokuthengisa kokuhamba komsebenziI-SSAE16
Kungani Ukumaketha Kwangempela Kwesikhathi Kubaluleke Kakhulu Ku-COVID Era